Xalalkayada Laser-ka - MimoWork
Nidaamyada Laser MimoWork
CO2 Laser Machine ee alaabta aan birta ahayn
Qalab ku habboon oo laga soo gooyay laser:
> Qoryo (MDF)
> Aan Tolmo ahayn
> Dharka Daabacan (Textiles)
> Dharka u adkaysta (Textiles)
CO2 Laser Machines ee MimoWork waxay u adeegayeen macaamiisha adduunka oo dhan dhinacyo kala duwan. Mashiinka laysarka oo xasilan oo la isku halayn karo iyo hage iyo adeeg fiiro gaar ah leh waxay keenaan wax soo saar caan ah oo horumarinaya waxtarka iyo wax soo saarka sare.
MimoWork waxay aaminsan tahay:
Khibrada sahaminta weligeed ah waxay hubinaysaa tignoolajiyada laser-ka ugu horumarsan macaamiisha!
Midka kugu habboon waa kan ugu fiican
MimoWork laser wuxuu u kala saaraa alaabadayada laysarka 4 qaybood iyadoo loo eegayo baahiyaha wax soo saarka gaarka ah ee macaamiisheena iyo shuruudaha.
Lagu qalabeeyay Kaamirada HD iyo kamarada CCD, Contour Laser Cutter waxaa loogu talagalay in lagu xaqiijiyo goynta saxda ah ee joogtada ah ee alaabta daabacan iyo kuwa qaabaysan. Nidaamkeena laser aragga ee caqliga leh wuxuu kaa caawinayaa inaad xalliso dhibaatooyinkaaqoonsiga contour iyada oo aan loo eegin midabada la midka ah ee alaabta, meelaynta qaabka, maaddo qallafsanaan ka sublimation dheeha kulaylka.
Eeg dhammaan moodooyinka
Ku habboon codsiyadaada, sawir-qaadaha leysarka ee CNC ee awoodda leh ayaa dammaanad qaadaya tayada codsiyada ugu baahida badan. Naqshadaynta gantry-ga X & Y waa qaab dhismeedka farsamaysan ee ugu xasilloon uguna adagkaas oo hubinaya natiijooyinka jarista nadiifka ah oo joogto ah. Qalab kasta oo laser ah ayaa awood u yeelan karaka baaraandega agabyo kala duwan oo kala duwan.
Aad u degdeg badanwaa ereyga kale ee Galvo Laser Marker. Ku hagidda laydhka laysarka iyada oo loo marayo muraayadda matoo-wada, mishiinka laysarka Galvo wuxuu muujinayaa xawli aad u sarreeya oo leh saxsanaan sare iyo ku celin.Calaamadaha MimoWork Galvo Laser waxay gaari kartaa calaamadaynta laysarka iyo aagga xaradhka min 200mm * 200mm ilaa 1600mm * 1600mm.
Mashiinka Goynta Laser Dijital ah ayaa si weyn loogu isticmaalaa habaynta sumadaha dhijitaalka ah iyo agabka milicsiga ee labiska shaqaynaya. Way xalisaa dhibaatada kharashka ee isticmaalka qalabka caadiga ah ee dhimista, taasoo keenaysa dabacsanaan tiro kala duwan. Wax qabad heer sare ah oo ku saabsan UV, lamination, dildilaaca, waxay ka dhigaysaa mashiinkan xal wadarta habka summada dhijitaalka ah ka dib daabacaadda.
Ha werwerin haddii aad wali wareersan tahay
Noogu imow La-talinta Nidaamka Laser-ka
Waxaan caawinnaa SMEs adiga oo kale ah maalin kasta!
Waa maxay dareenka iyo talooyinka la gaarayo marka aad raadineyso beddelka habka mashiinnada cusub ama aad maalgeliso mashiinka laysarka?
Shaki la'aan, la talinta iibka ka hor waa muhiim si aad wax uga barato baahiyahaaga qaarkood.
Iyadoo khibrad qoto dheer oo 20-sano ah oo ku saabsan horumarinta iyo fahamka tignoolajiyada laysarka iyo codsiyada warshadaha, la-taliyayaashayadu waxay ka jawaabi doonaan su'aalahaaga waxayna ku siin doonaan talo habraac ku habboon adiga iyo shirkaddaada.
Waxaad ka gudbi kartaa tan caadiga ah
Ikhtiyaarada laysarka dheeraadka ah iyo kuwa kala duwan ayaa diyaar u ah kala duwanaanshaha shuruudaha la habeeyey. Xulashada laser-ka gaarka ah iyo kuwa gaarka ah ayaa dhacaya waxayna abuuraan fursado badan oo wax-soo-saar hufan oo dabacsan sababtoo ah daraasad joogto ah oo ku saabsan hababka laysarka iyo hawlaha la bixiyay. Waxaan u keenaynaa xulashooyinka leysarka gaarka ah ee baahidaada kala duwan ee wax soo saarka.
Eeg dhammaan xulashooyinka
Hadda Codso Baadhista Laser-ka ee Qalabkaaga!